"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : ငွေမျက်နှာကြည့် ပြီး သာသနာ့ မျက်နှာ မကြည့်သူ
- ထစ်ကနဲရှိ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းမယ့်သူတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ?
- ထစ်ကနဲရှိ ပိုစတာကိုင်၊ ဆိုင်းဘုတ်ကိုင် လမ်းမပေါ်တက် အော်မယ့်သူတွေဘယ်ရောက်နေလဲ?
- ထစ်ကနဲရှိ လက်ရဲဇက်ရဲ ရိုက်ရဲနှက်ရဲတဲ့ ကြံဖွတ်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ?
- ထစ်ကနဲရှိ လွှတ်တော်ကို တင်ပြမယ်ဆိုတဲ့ အမတ်တွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ?
- ထစ်ကနဲရှိ သမ္မတကြီးဆီတိုင်စာပို့မယ်ဆိုတဲ့သူတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ?
- အသံကောင်းဟစ်တဲ့ မီဒီယာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ ဒါမျိုးကျတော့ တစ်မိုးလုံးဖျောက်ဆိတ်နေကြပါလား?
- ဖာသည်မ၊ မကောင်းတဲ့မိန်းမမို့လို့၊ ငါတို့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်နေလဲ နာစရာမလိုဘူးလို့ ယူဆကြသလား?
- ဦးသိန်းစိန်၊ ဒေါ်စု၊ NLD၊ ဘာပါတီ၊ ညာပါတီ၊ ချာပါတီ၊ KIA၊ ရွှေည၀ါ၊ ငွေည၀ါ၊ ၈၈၊ ၉၉၊ မင်းကိုနိုင်၊ ငါ့ကိုနိုင်၊ ကုလား မြအေး၊ ကုလား နှမပေး၊ မိုးသီးဇွန်၊ လေသီးဇွန်၊ ဇာဂနာ၊ မွှေးညှပ်၊ နဖာကလော် သင်တို့အားလုံးနဲ့ ဒီလိုဓါတ်ပုံပုံမျိုးက သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလား? အာဏာရရေး၊ ဒီမိုခရေဇီရရေးလောက်အရေးမကြီးဘူးလို့ ယူဆကြသလား?
- မြန်မာအမျိုးသမီးရေးရာ၊ မြန်မာအမျိုးသမီး စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်း၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတို့က မိန်းမတွေ... ခင်ဗျားတို့လင် ဗိုလ်ချုပ်၊ ညွှန်ချုပ်၊တွေအကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့သားသမီးတွေအကြောင်း၊ စိန်တွေ၊ ကားတွေ၊ အိမ်တွေ အကြောင်းဝိုင်းဖွဲ့ပြောဆိုတာရယ်၊ အခွင့်အရေး ပါမစ်ပေးရင်ရှေ့ဆုံးက ယူဖို့လုပ်တာရယ်ကလွဲရင်... ဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုခင်ဗျားတို့နဲ့ မပတ်သတ်ဘူးလို့ ယူဆသလား?
- American က ကုလားမိုဟာမက်နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုလေးတစ်ခွေရိုက်တာကို ကမ္ဘာပေါ်က ရှိသမျှကုလားအားလုံး သေလောက်အောင်နာ မီးရှို့၊ လူသတ် ခွေးတွေလိုအုပ်စုလိုက် ၀ိုင်းကိုက်နေကြတာ အားလုံးအမြင်ပဲ။ ဒါတောင်သူတို့ အသား၊ သူတို့အမျိုးကိုထိတာမဟုတ်သေးဘူး၊ မီဒီယာနဲ့ထိပါးတာပဲရှိသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို နိုင်ငံထဲမှာနေပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လူလူချင်းမျိုနေတာ၊ လူမျိုးနဲ့ ဘာသာကိုထိပါးနေတာကျတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နာရကောင်းမှန်းမသိကြတာလား?
- ဆရာတော် သံဃာတော်တွေအနေနဲ့ရော ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာ မိမိတို့နဲ့မသက်
ဆိုင်ဘူးလို့ ထင်မြင်ပြီး ဥပေက္ခာပြုနေကြတာလား?
- နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ မဂ်မျိုးစေ့ ဖိုလ်မျိုးစေ့ရှိမှ ရောက်အောင်ကျင့်ကြံနိုင်တယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားရာ အိန္ဒိယအပါအ၀င်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကနေ သိမ်းသွင်းခံလိုက်ရတဲ့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံအားလုံး၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောတို့မှာ မဂ်မျိုးစေ့ ဖိုလ်မျိုးစေ့ မရှိတော့တဲ့အတွက်
ခင်ဗျားတို့ရောက်ချင်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ဝေးသွားပြီ။
ဒီလောက် ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဆိုတာ လက်တစ်ဆုပ်စာပဲ ကျန်တော့တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာလည်း ဒေသအချို့ဟာ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းအထက် အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ ၀ါးမျိုခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တာတောင်မှ
ခင်ဗျားတို့အမြင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက မြန်မာနိုင်ငံကနေ မပျောက်ကွယ်နိုင်ဘူး
လို့ ရူးမိုက်စွာ ယူဆနေကြတုန်းပဲလား?
- သံဃာတော်တွေ အပါအ၀င် တော်တော်များများက ဒါမျိုးကို စိတ်မ၀င်စား
ဘူး၊ ၀ိပဿနာကျင့်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ မွတ်စ်လင်ကုလားဖျက်လို့ သာသနာပျက်ပြီး
- ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် သာသနာပြုတဲ့ Promotion အလုပ်ပဲ လုပ်
သင့်တယ်၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတဲ့ Protection နဲ့ Prevention အလုပ်ကို
လုပ်ဖို့ မလိုအပ်ဘူးလို့ ယူဆတယ်ဆိုရင် အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဂါယာကို မြင်
ယောင်ကြည့်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရမရှိတော့ဘဲ အသွင်သဏ္ဍာန်ပဲ ကျန်ခဲ့တာကို
*** သမ္မတမှအစ သူတောင်းစားအဆုံး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကုန်လုံး ဒီဓာတ်ပုံပါကိစ္စမျိုးကို မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ ဆက်လက်ယူဆနေမယ်ဆိုရင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
မွတ်စ်လင်တို့ ပူပူနွေးနွေး ရခိုင်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို လည်လှီးခဲ့တဲ့ဓား
ဟာ၊ မိမိတို့လည်ပင်းနဲ့ နီးသည်ထက်နီးလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။